Nweta mbadamba nkume Alldocube X naanị $ 219 | Gam akporosis
Nweta mbadamba nkume Alldocube X naanị $ 219
Ignacio Sala | | Noticias, Mbadamba gam akporo
Izu ole na ole gara aga, anyị kwuru banyere mbadamba nkume ọhụrụ nke na-achọ ịhụ ìhè nke ụbọchị, Alldocube X, mbadamba nkume nke nyere anyị atụmatụ nke ọtụtụ ndị nrụpụta ndị ọzọ ga-amasị mana na n'ihi enweghị ahịa ahịa, na-ebupụta ngwaahịa nke ụdị a. Ana m ekwu banyere mbadamba Alldocube X, mbadamba nkume Android Oreo 8.1 na ihuenyo 2k Super AMOLED.
Ihe ndị Samsung na Lenovo na-achọkarị maka mbadamba gam akporo fọrọ nke nta ka Samsung na Lenovo na-achịkwa ya, ya mere, ọ dịghị mfe ịnweta ọnọdụ na ngalaba a ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwado nke nnukwu mmadụ. Guysmụ okorobịa si na Alldocube mbadamba, agbanweela ebe ndị na-ekwo ekwo na Indiegogo inwe ike imezu atụmatụ gị dị egwu.
Ọ bụrụ na anyị so na ndị izizi ịdebanye aha maka onyinye a ka ọ bụrụ na mgbe ewepụtara ọrụ ọchụchọ ego, anyị ga-enwe ike ijide mbadamba a maka naanị $ 219, $ 50 maka ọnụahịa ya oge niile. N’abalị asatọ nke Ọgọstụ, mkpọsa ego a ga - ebido ma anyị ga - enwe mkpụrụ ụbọchị asatọ iji nweta ohere mmalite.
1 Alldocube X Mbadamba nkọwa
2 Etu ị ga-esi nweta tebụl Alldocube X maka $ 219
Alldocube X Mbadamba nkọwa
Super AMOLED ihuenyo na 2k mkpebi, 2560 x 1600 pikselụ, na a 10.000: 1 iche ruru na a 16:10 ihuenyo format. Na mgbakwunye, o nwere nits 300 nke kachasị nchapụta na ntụpọ 288 kwa anụ ọhịa.
8176 GHz 6-isi MediaTek MT2.1 processor na ihe ngosi 6250 MHz IMG PowerVR GX600.
Byda site n'aka onye na-emepụta AKM nke na-ebelata ntụgharị ma na-enye ụda dị elu.
4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 128 GB site na iji kaadi microSD.
8 mpx ihu igwe na azụ.
Batrị mAh 8.000 nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ vidiyo vidiyo 8. Na mgbakwunye, ọ na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa site na ọdụ USB-C, nke na-enye anyị ohere belata oge nnabata nke ngwaọrụ ahụ.
Etu ị ga-esi nweta tebụl Alldocube X maka $ 219
Iji nweta mbadamba nkume a, ụlọ ọrụ na-enye anyị nhọrọ abụọ.
Site na ngwaahịa website dị na Indiegogo
Site na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Nweta mbadamba nkume Alldocube X naanị $ 219
The Honor Note 10 bụ ọrụ: 6.95-inch ihuenyo, Kirin 970 na ndị ọzọ
Huawei Mate 20 Pro ga-enwe ihe mmetụta ultrasonic na ihu 3D